Ungamamkela njani kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungamamkela njani kwiTwitch?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 328
Imowudi yokubamba kwiTwich Ngumsebenzi obandakanywe kubukho kubo bonke abasebenzisi beTwich. Oku kuvumela ababhalisile ukuba baxube izinto xa zisiza usasaze ngqo usasazo olusuka kwezinye iindlela zeTV Twitch.tv.
Siza kunika Iingcebiso malunga noncedo kunye nokubi komamkeli kwi-twich.
Esinye sezizathu xa I-Twitch streamers ibamba amaqela okusingatha, yenzelwe iinjongo zokwazisa. Nangona kunjalo, abaqulunqi abancinci banokufumana abalandeli ngakumbi ngokufuna ukusasaza umxholo wabo kusasazo ngqo kunye namajelo amakhulu. Oku kukunika indlela entle yokutshintsha izimvo kunye nokomeleza indawo ohlala kuyo kwi-intanethi.
ukuba uququzelele iinkomfa, imisitho kunye nothando losasazo lomkhosi omabini igqibelele. Nokuba udlala ikonsathi kwiTwitch.tv apho iimvumi zenza ukubonakala kwazo okukhethekileyo, oku kungenxa yabadali umgcini ngambini.
SGDQ kunye ne-EVO Yeyona tumente iphambili yomdlalo osasazwa kuyo umkhosi wamabini. Kuthetha ukuba ababukeli ncokola nabanye ngexesha lokwenyani kwaye emva koko banokuzonwabela ezi imidlalo yezemidlalo ye-elektroniki.
Umncedisi weTwich isavumela ukusebenzisa nawuphi na umsebenzi ngokuthatha inxaxheba ephezulu. Sinezinto ezininzi onokukhetha kuzo ukwenza eli nqaku. Siza kuchaza indlela yokubamba umntu kwi-Twich:
Ukwenza uMgcini oZenzekelayo.
Sebenzisa ibhokisi yengxoxo.
Via imowudi yokubamba iselfowuni (i-iOS kuphela).
Ungabamba njani ezinye iiTwitch streamers kwiTwich?
Sikunika le miqondiso ilandelayo:
Vula ibhokisi yengxoxo
Sijonge ijelo elifunwa ngababini kwaye bakope igama.
Cola kwincoko yakho kwaye ungeze / ubambe phambi kwayo
Ukuba ufuna ukongeza esinye isitishi, unako sebenzisa / host host kwakhona. Kodwa iyakuphindeka kathathu kuphela.
Awudingi ukuba nexhala ukuba Umgcini ngambini yenza utshintsho kwigumbi lakho lengxoxo. Ikwavumela eyakho Ababhalisi bayasebenzisana kwaye bagcine zonke iisetingi zabo zengxoxo zihleli.
Ungayibamba njani i-Twich kunye nezinye ii-Twich streamers usebenzisa i-mobile app?
Nika amandla umphathi omabini kwiselfowuni ikunika lula ukuba ungabotshwanga esihlalweni sakho. Apha sibonisa ungayibamba njani kwiTwich usebenzisa usetyenziso lweselfowuni.
Khuphela usetyenziso lweTwitch kwiVenkile ye App.
Cofa kwi icon encinci yegiya ukuvula imenyu ehlayo.
Khetha u- "Host" ukhetho emazantsi oluhlu
Fumana ijelo ofuna ukulinika umphathi weTwich.
Ayizizo zonke izinto ezigqibeleleyo, ungayenza khuphela iTwitch.tv kwifowuni yakho ye-Android, kodwa ukunciphisa umda wokukhuphela umphathi weTwich kwelinye ijelo. Ukusingathwa kweTwich yeselfowuni kufumaneka kuphela kubasebenzisi be-iOS.
Ungayibamba njani iTwich kwiTwich?
Ukuba usebenzisa umyalelo olula unokugqiba izinto ngaphandle kweengxaki. Sikuxelela indlela yokushiya umgcini kwiTwitch ngebhokisi yencoko:
Vula ingxoxo yakho kunye nejelo leendwendwe.
Chwetheza / unhost ngaphambi kwegama lakho lomsebenzisi
Lindela isaziso ukuze uqiniseke ukuba umise ngempumelelo umphathi kwiTwich.
Kubalulekile ukuba ukuze ulawule iiseshoni ze umkhosi Twich, qaphela ukuba abahleli bakho banokuyenza. Banokubeka iifayile ze Bavumele ukuba bakhuthaze abaqulunqi abathile nokuba awukho kwi-intanethi. Oku kuthetha ukuba kubalulekile ukuqinisekisa xa usenza kwiitshaneli zakho ozithandayo ukuze kungabikho siphithiphithi.
1 Ungabamba njani ezinye iiTwitch streamers kwiTwich?
2 Ungayibamba njani i-Twich kunye nezinye ii-Twich streamers usebenzisa i-mobile app?
3 Ungayibamba njani iTwich kwiTwich?
Uyenza njani imodyuli kwitwitch?